Ksnip: Bilaash, iskutallaab-barxad barnaamij Qt ku saleysan shaashadda | Laga soo bilaabo Linux
Maanta waxaan ka hadli doonaa codsi casri ah oo waxtar leh oo la yiraahdo "Ksnip". Kaas oo ka mid ah barnaamijyada badan, ujeeddadooduna tahay qabashada shaashadda de nuestros Miisaska, taasi waa, waxa si muuqata uga dhex socda gudaha kombuyuutarkeena.
Laakiin, "Ksnip" Ka sokow ahaansho bilaash ah, casri ah oo qaab-dhismeed badan, sidoo kale wuu ogolaanayaa wax ka beddel oo wadaag shaashadaha shaashadda ayaa soo saaray oo tifaftiray.
In kastoo, shakhsi ahaan duurka ku ah shaashadda qabsada, Caadi ahaan waxaan isticmaalaa codsigeyga hooyo Deegaanka Desktop (XFCE iyo Plasma), mararka qaarkood waxaan jeclahay inaan isticmaalo oo aan kugula taliyo Xirfadaha.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kuwo badan barnaamijyo la mid ah ama beddelaad ah aad ufiican labadaba GNU / Linux, sida Windows o MacOS. Sidaa darteed, hoosta waxaan uga tagi doonnaa kuwa xiiseynaya mawduuca, xiriiriyeyaasha la xiriira galitaannadii hore ee codsiyada la midka ah:
"ShareX, marka lagu daro inay tahay codsi bilaash ah oo furan, awood u leh qabashada ama duubista aag kasta oo shaashadda kumbuyuutarka ah, waxay la wadaagi kartaa sawirrada la qabtay, soo rogi kartaa sawirrada, qoraalka ama noocyada kale ee faylasha meelo badan oo la isku haleyn karo oo u qalma. Sababaha ka dhigaya shaashad shaashad heer sare ah, qaab wadaag fayl iyo qalab wax soo saar waxtar leh." ShareX: Furan Ilaha Abka ee Screenshot ee Windows
Shutter: Qalab qabasho shaashad heer sare ah.
1 Ksnip: Screenshot iyo Qalabka Fasiraadda
1.1 Waa maxay Ksnip?
Ksnip: Screenshot iyo Qalabka Fasiraadda
Waa maxay Ksnip?
Sidaad sheegtay bogga rasmiga ah ee GitHub, "Ksnip" es:
"Shaashad isweydaarsi ah iyo qalab sharaxaad ah. Waxaa intaa dheer, waxay ku saleysan tahay Qt waxayna siisaa astaamo sharaxaad badan shaashadahaaga."
"Ksnip" hadda socda isagii 1.9.0 version, oo ah maalmo yar kadib markii lasii daayay. Sidaa darteed, hadda waxay leedahay, iyo kuwo kale oo badan, astaamaha iyo wararka soo socda:
Taageerada qaab-dhismeedka badan: Loogu talagalay Linux (X11, Plasma Wayland, GNOME Wayland, iyo xdg-desktop-portal Wayland), Windows, iyo macOS.
Qabashada: Waxay qabataa aag afar geesood ah oo caado u ah oo lagu sawiri karo calaamadda jiirka, shaashadda / kormeeraha uu tilmaamaha jiirku hadda ku sugan yahay, shaashadda oo dhan, oo ay ku jiraan dhammaan shaashadaha / kormeerayaasha, shaashadda daaqadda ee hadda xoogga la saaray, ee Shaashadda daaqadda hoosta tilmaamaha jiirka, hababka kale ama qaabeynta kale.
share: Si toos ah ugu guur shaashadda imgur.com qaab adeegsade ama qaab qarsoodi ah. Iyo xitaa iyaga ku soo dheji adoo adeegsanaya qoraallo khaas ah oo isticmaalaha lagu qeexay.
Isbedel: Waxay sahlaysaa in lagu sharaxo (wax ka beddel) shaashadda qalinka, calaamadeeyaha, leydi, leyliga, qoraalka, iyo saamaynta kale. Intaa waxaa sii dheer, si aad ugu oggolaato isticmaalka istiikaradaada shaqsiyeed ama shaqsiyeed, ku dabakh saamaynta nuugista gobollada sawirka muuqaalka iyo muuqaalka, kuna dar saamaynta sawirka (hooska, culeyska jihada, rog midabka ama soohdinta).
Si loo hirgeliyo, waxaa si toos ah loogu dhejin karaa dhammaantood - GNU / Linux Distros, via Maamulaha xirmada hooyo, jaantus, ama konsole. Laakiin, inaad isticmaasho nooca ugu dambeeyay waad awoodi kartaa soo dejiso oo rakib faylka lagama maarmaanka ah ama ku habboon ee la fulin karo, laga bilaabo soo socda isku xirka iyo raacitaanka tilmaamaha aad u faahfaahsan ee kan kale isku xirka. Si loo isticmaalo, waa in lagu socodsiiyaa oo keliya Mashiinka Codsiyada.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan arjiga, wuu ka duwan yahay rakibayaasha iyo noocyada, iyo foomamka rakibaadda, waxaad booqan kartaa xiriiriyeyaasha soo socda "Ksnip" gudaha:
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" oo ku saabsan bilaashka, bilaashka iyo iskutallaabta arjiga ee loo yaqaan «Ksnip», astaamaheeda guud iyo wararka nooca cusub «1.9.0» dhawaan la sii daayay; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, guud ahaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ksnip: Barnaamij bilaash ah oo iskutallaab ah oo ku saleysan Qt ee shaashadaha lagu duubo
GRUB 2.06 horey ayaa loo sii daayay waxaana kujira taageerada LUKS2, SBAT iyo inbadan.
Bitcoin waxay noqon kartaa qandaraas sharciyeed El Salvador